संविधानमा भारत मौन, काश्मिरमा नेपाल मौन, कहाँ छ नेपाल-भारत सम्बन्ध ? « Drishti News – Nepalese News Portal
संविधानमा भारत मौन, काश्मिरमा नेपाल मौन, कहाँ छ नेपाल-भारत सम्बन्ध ?
१० भाद्र २०७६, मंगलबार 12:56 pm
भारतीय विदेशमन्त्री सुव्रमण्यम जयशंकरले गएको हप्ता बँगलादेश भ्रमण गरे । जयशंकरको भ्रमणलगत्तै बँगलादेशले जम्मू काश्मिर मामलामा भारतको कदमबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक ग¥यो । उसलाई संविधानबमोजिम दिदै आएको विशेष स्वायत्त राज्यको दर्जा खारेजको निर्णयलाई आन्तरिक मामला भनिदियो । भारतका लागि छिमेकी बँगलादेशले काश्मिर मामलामा बनाएको धारणा सुखद रह्यो । छिमेकमा समर्थन जुटाउने जयंशकरको कुटनीतिक पहलमध्ये यो नयाँ सफलता थियो ।
इतिहास र वर्तमानसम्मका घटनाक्रमले अबको एक महिनाभित्र नेपाल भारत सम्बन्धको यथावस्थाको चित्र सतहमै देखिनसक्छ । नाकाबन्दीपछिको सम्बन्धको अवस्थामा अझै अन्यौल छ । बोलीले मात्र दुई देशको सम्बन्धको गहिराई नाप्न सकिदैन । एक अर्कालाई पर्दा मिल्ने साथ र सहयोग आफैमा उत्तर हो ।
भारतका लागि नेपाल भूगोलले मात्र नजिक छैन, सांस्कृतिक र धार्मिक कारणले पनि निकट छ । दुवै देशमा बहुसंख्यक जनता हिन्दु धर्म मान्दछन् । दुवै देशको तीर्थस्थल साझा छ । तीर्थाटनका लागि सहज आवत्जावत् सदीऔं देखि चल्दै आएको छ । राजनीतिक सम्बन्धभन्दा पनि समान संस्कृतिले समिप रहेको देश भएकाले एक अर्काको सुख दुःखमा साथ खोज्ने परम्परा चल्दै आएको छ । तर, भारतले यसपटक काश्मिर मामलामा नेपालबाट खोजे जस्तो र चाहेजस्तो सहयोग पाउन सकेन । काश्मिर मामला आन्तरिक मामलामा समर्थन जनाउन भारतले कुटनीतिक लबिङ गरेकै हो । उसले कतिपय खाडी मुलुकबाट पनि समर्थन पायो । त्यसप्रकारको धारणा ल्याउने वातावरण बनाउन सक्यो । तर, सबैभन्दा नजिकको मित्रराष्ट्र नेपालबाट कुनै धारणा आएन । जबकि विगतमा नेपालले काश्मिर मामलामा भारतलाई समर्थन गरेको इतिहास छ । ३ अगष्ट सन् १९५७ मा तत्कालिन नेपालका प्रधानमन्त्री डा. के आई सिंहले पत्रकार सम्मेलन गरेरै ‘काश्मिर मामलामा नेपालले सधै भारतलाई साथ दिनुपर्ने’ बताएका थिए । इतिहासकै निरन्तरता पाएन भारतले । छिमेकबाट जुन साथ पाउनुपर्ने हो त्यो उचित समयमा नपाएको ठान्यो । यसले भारतीय पक्षको मनमा चीसो परेको हुनसक्छ ।
भारतीय पक्षले बाहिर जे भनेपनि नेपालसँगको पछिल्लो समय कहीं न कहीं विश्वासको वातावरण बलियो बनिसकेको छैन । नाकाबन्दीपछि ‘राष्ट्रवादी’ परिचय बनाएर चुनावी सफलता हासिल गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारतसँग केही रिजर्भेसन अझै देखिन्छ । विशेषगरी संविधान निर्माणमा भारतले लिएको नीति र विगतका सन्धी कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा अझै असन्तुष्ट छन् । जुन द्विपक्षीय सम्बन्धको विषय आउँदा कुण्ठाका रुपमा कुनै न कुनै रुपमा ओलीबाट अव्यक्त हुनेगर्छ । भारतीय पक्षबाट विगतका गल्तीको महशुश होस् भन्ने ओलीको अडान कायमै देखिन्छ । उनी त्यसैले पनि संविधानको स्वागत मोदीको मुखबाट गराउन चाहन्छन् । जयशंकरको नेपाल भ्रमणका बखत मोदीलाई संविधान दिवसमा प्रमुख अतिथिका लागि निम्तो पठाए । दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाईमा पु¥याउने उत्तम अवसर हुने निष्कर्षका साथ सरकारले पठाएको निम्तो मोदीले स्वीकार्लान् ? यो प्रश्नको उत्तर ३ असोज अघि आइहाल्ला । तर, मोदी संविधान दिवसमा सहभागी भएमा ओली भारतसँगको सम्बन्धमा विजयी हुनेछन् । सायद ओली त्यही चाहन्न् । तर, यो निकै कठिन विषय हो ।
भारतसँग नाकाबन्दीका समयमा सम्बन्धमा समस्या आएको थियो । अहिले त्यो स्थितिमा बदलाव आइसकेको सन्देश गइरहेको छ । तर, नाकाबन्दी अघि जुन तहमा नेपाल भारत सम्बन्ध थियो त्यो अवस्था बनिसकेको छैन । हुनत कार्यकालको अन्तिम समयमा आएर तत्कालिन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले भारत भारत सम्बन्ध इतिहासमा कहिले नभएको सुमधुर अवस्थामा रहेको बताएकी थिइन् । उनले नयाँ दिल्लीको विदेश मन्त्रालयमा त्यसो भनिरहँदा पंक्तिकार समेत साक्षी थियो । भारतीय विदेशसचिव विजय गोख्लेले दुई देशको सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि इतिहासमा नअल्झिएर भविष्यको सुन्दर बाटो निर्माण हुनुपर्ने बताएका थिए । यसमा पहल भएका होलान् । तर, सम्बन्ध अझै मजबुत अवस्थामा छैनन् । नेपाल मामलाका जानकार जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक राजेश खरातले एक हप्ता अघि काठमाडौंमा आएर दुई देशबीच सर्वप्रथम विश्वासको वातावरण बन्नुपर्ने बताएका थिए । नेपाल आइरहने भारतीय जनता पार्टीनिकट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्का प्रभावशाली नेता सुनिल अम्बेकरले गएको हप्ता काश्मिरमा भारतले चालेको कदम वैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरुप भएको भने । तर, नेपालले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएकाले धन्यवाद दिने अवसर पाएनन् ।